Nwa m nwoke choro a kaadị azụmahịa maka azụmahịa imepụta DJ na egwu ya (ee, ọ fọrọ nke nta ka ọ nweta Ph.D. na Math). Iji chekwaa ohere mgbe ị na-egosipụta ọwa mmekọrịta ya niile na kaadị azụmaahịa ya, anyị chọrọ ịnye ndepụta dị ọcha site na iji akara ngosi maka ọrụ ọ bụla. Kama ịzụta logos ọ bụla ma ọ bụ nchịkọta sitere na saịtị foto ngwaahịa, anyị ji ya font Awesome.
Akara edemede bụ vector dabere na scalable gị oru ngo, yabụ ha zuru oke maka iji na desktọọpụ desktọọpụ ngwa dị ka Illustrator ma ọ bụ Photoshop. I nwedịrị ike ịgbanwe ha gaa n’ihe ndepụta ma jiri ha mee ihe atụ.
Nke ahụ bụ ihe niile dị ya!
Nke a bụ vidiyo dị ọsọ ọsọ banyere otu m ga-esi chọta akara ngosi na Font Awesome wee jiri ha n'ime faịlụ Illustrator m.
Nke a bụ nnukwu nlele vidiyo banyere otu esi eji Font Awesome na Illustrator (ma ọ bụ nyiwe desktọọpụ ndị ọzọ).
Otu ihe ị kwesịrị iburu n'uche bụ izere iji ya na ikpo okwu nke na-adịghị etinye font ma chọọ ka etinye ya na sistemụ ahụ. Iji ya n'ime Okwu, dịka ọmụmaatụ, ga-achọ ka onye nnata gị tinye font ya na sistemụ ha iji hụ ya. Na Illustrator ma ọ bụ Photoshop, ịnwere ike iji Mepụta Outlines iji gbanwee font na vector oyiyi.